अछामका स्थानीय तह निमित्तको भरमा, एउटै कोठामा ५ वटा वडा कार्यालय
By dineshfm on	 January 4, 2018 स्थानीय
शिवराज खत्री, अछाम पुस २० गते ।
अछामका १० वटा स्थानीय तह हरुमा कर्मचारीहरुको अभाव भएको छ । कर्मचारी अभावमा सात वटा तह निमित्तको भरमा संचालन भईरहेका छन । उपसचिवको दरबन्दी रहेका स्थानीय तहमा शाखा अधिकृतले चलाईरहेका छन् ।
उपसचिवको दरबन्दी रहेको मंगलसेन, साँफेबगर र कमलबजार नगरपालिका शाखा अधिकृतले चलाईरहेका छन् भने पञ्चदेवल बिनायक नगरपालिकामा शाखा अधिकृत पनि नभएर नासुले चलाइरहेका छन् । मेल्लेख, चौरपाटी, रामारोशन गाउँपालिका नासु निमित्त भएर चलाइरहेका छन् । कर्मचारी अभावमा स्थानीय तहमा आएको बजेट सबै खर्च हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।
जिल्ला युवा संजालले संचालन गरेको युवा सूचना केन्दमा ५ वटा कार्यालयहरु एकै कोठामा सञ्चालन भईरहेको छ । जिल्ला सदरमुकाम अवस्थित मंगलसेन नगरपालिकाको वडा नम्बर ३, ४, ५, ६, र ७ का वडा कार्यालय र युवा सूचना केन्द्र तथा पुस्तकालय पनि सोही कोठा भित्र रहेका कारण सेवाग्राहीलाई सास्ती भईरहेको छ ।
सेवाग्राहीले कोठा भित्र गएर आफ्नो काम हुने ठाउँ पत्ता लगाउन पनि गाहे भईरहेको स्थानीय शुशिल भण्डारीले बताउनुभयो । वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष हरीप्रसाद ढुंगानाले ठाउँ अभावले गर्दा कार्य कक्षमा बसेर सेवा दिन असम्भव भएको वताउनुभयो ।
वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष सिद्धराज ढुंगानाले भवन र कर्मचारीको अभावमा वडामै हुने कामका लागि पनि दैनिक लामो समय हिँडेर नगरपालिकाको कार्यालयमै पुगेर सेवा दिनु परेको बताउनुभयो ।
Previous Articleजानकी गाउपालिकाको वडा नं. ९ जुवातास निषेधित क्षेत्र घोषणा
Next Article अनावश्यक इमेल आएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी ब्लक गर्नुहोस् अनावश्यक इमेल